Hafu Hupenyu 2: Project Borealis ine nyowani yakavandudzwa vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Hafu Hupenyu 2: Project Borealis ine itsva nyowani vhezheni
Fans yeHafu Hupenyu 2, iro hombe zita reValve, vagadzira yakagadziridzwa vhezheni yeiyi vhidhiyo mutambo unozivikanwa se Hafu Hupenyu 2: Mapurojekiti Borealis. Ini zvechokwadi ndinoda idzi mhando dzevhidhiyo mutambo mamods akagadzirwa nevateveri, sezvo iwo achiwanzo ari anonakidza kwazvo. Saka dai iwe uri fan of Hafu Hupenyu 2: Chikamu 3, iwe uchave unofarira uye unakirwe ichi chitsva mupiro kubva munharaunda iyo inounza nhau sezvatichazotaura pamusoro pazvo.
Iwe unotoziva kuti iko kududzira kusiri kwechokwadi kweiyo Chikamu 3 cheHalf Hupenyu 2, uye kuti inoenderera mberi iri noutano hwakanaka sezvaungaona, uye zvese kugutsa vateveri veBlack Mesa mitambo yemavhidhiyo. Zvino kwauya a vhezheni itsva yemuyedzo wekuita izvo zvinoita kuti tione kuti kunatsiridzwa kwatiri kutaura nezvako kwave kunogutsa nemiyedzo yakaitwa neOpenGL neVulkan se graphic APIs uye kuti vanoratidza mimwe mitezo yekuita ...Nekudaro, ivo vanogadzira vakasimbisa kuti ivo vacharamba vachiita fambiro mberi kuendesa kunyange zvirinani mhedzisiro mune ramangwana. Unotoziva kuti vakwanisa kuwana rutsigiro rweLinux pakutanga, mune yazvino vhezheni 2.0.0 yemuedzo uye ne2.1.0 vakagadzirisa zvinhu zvakawanda. Yakagadziridzwa kune injini yemifananidzo Shamisa Engine 4.21.2, uye zvakare kumwe kufambira mberi kurerutsa kana kudzikisira matambudziko neOpenGL neVulkan.
Ehezve, multithreaded rutsigiro rwezvimedu uye kudhumhana simulation yakawedzerwa, kuita kweodhiyo kwakagadziridzwa, magadzirirwo uye kusimudzira kwekushambadzira, nezvimwe. dzimwe nhau zhinji. Kana iwe uchida kurodha pasi iyo bvunzo yeLinux, unogona kuiwana iko apa: itch.io. Uye kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve iyo Borealis purojekiti pachayo, unogona kuwana iyo zviri pamutemo webhusaitiIwe unotoziva kuti iyo yekurodha pasi, iwe unogona kupinda zvakananga nenzira iyi, nezve bvunzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Hafu Hupenyu 2: Project Borealis ine itsva nyowani vhezheni
Gordon wakasununguka akadaro
Zvakanaka, mutambo uyu unoita kunge wakanaka kwandiri saka nyaya yeHafu-Hupenyu 2 ichaenderera uye tichanzwisisa nhoroondo yayo yese XD
Pindura kuna Gordon Freeman
Makulu Linux Aero Edition, inokurudzirwa distro yeavo vari kutama kubva kuWindows
European Union inotangisa chirongwa chemubairo chekutsvaga madhigi mune mahara software